SEOUL Aesthetic Clinic | Beauty MM
ခေတ်မှီကုထုံးများ၊ ဘေးကင်းထိရောက်သောနည်းပညာများဖြင့် စနစ်တကျကုသပေးနေသော SEOUL Aesthetic Clinic မှာ မိမိနှင့်သင့်လျော်သောကုထုံးများကို အလှအပရေးရာဆရာဝန်များနှင့်တိုင်ပင်ပြီး ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများဖြင့် ဘေးကင်းထိရောက်စွာလာရောက်ကုသမှုခံယူနိုင်ပါပြီ
လစဉ် လစဉ် Promotion အစီအစဉ်များလည်းရှိတာမို့လက်လွတ်မခံပါနဲ့ နော်
Open Hours : 10:00 AM – 6:00 PM
09 263 635 757
No.(1019), Kyaw Thu 21st Street, Waizayandar Road, South Okkalapa Township.
💦March လ ရဲ့ ကော်လဂျင်ကြိုး promotion 😂
🌼ကြိုးတစ်မျက်နှာလုံးအပြီးအစီး – 500,000ks 🌼
💦ကော်လဂျင်ကြိုးအသေး 30 – 120,000ks 💦
💦 ကြိုးကြီး ၂ကြိုး + ကြိုးသေး ၃၀ – 280,000ks
🎁အတန်ဆုံး package – ကြိုးအကြီး2ချောင်း ၊ ကြိုးအလတ် ၄ချောင်း ၊ ကြိုးအသေး အချောင်း 30 = 380,000ks 🎁
🌸လိုအပ်တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး ကြိုးအရေအတွက်လည်း ခွဲထိုးနိုင်တာကြောင့် လှလည်းလှ ဈေးလည်းသင့်တဲ့ Promotion လေးပါရှင့် 😘
🌟ကော်လဂျင် ကြိုးထည့်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးများ 🌟
👱🏻‍♀️အရေးအကြောင်းများကို ချက်ချင်းသိသာစွာ တင်းရင်းစေခြင်း
✨Collagen ကိုလှုံဆော်ပေးတာကြောင့် တစ်လအတွင်း အသားအရေဝင်းပလာခြင်း
🌟အနေအထိုင်ဂရုစိုက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ( 1 )နှစ်မှ ( 1 ) နှစ်ခွဲဝန်းကျင်အထိကြာရှည်ခံခြင်း
Advanced Korean Technique ဖြင့်အရေပြားအထူးကုကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်နော် 👩🏻‍⚕️
❗️Promotion ကာလကတော့ March 15ရက်နေ့ ထိသာ ❗️
‼️Promotion ကာလကတော့ March 31 ရက်နေ့ထိသာ‼️
🌼သင်္ကြန်အမှီလှနိုင်ဖို့ဆို March လမှာ Smile Line ကြိုးထိုးလိုက်မှ ကွက်တိလှသွားမှာနော် 🤩
💎ကုထုံး ( 1 ) Smile line thread ( ကြိုးထိုးကုသခြင်း )
🎁Smile line ကြိုး – 100,000ks 🎁
💦Collagen ကြိုးကြီး – 120,000ks 💦
– သဘာဝအတိုင်း အရေပြားထဲမှ ကော်လဂျင်လှုံဆော်ပေးတဲ့ ကုထုံးဖြစ်ပြီး အချိန် ( ၁လမှ ၁လခွဲ ) အတွင်းသိသာခြင်း
– နေထိုင်မှုပုံစံအလိုက် အချိန် ( တစ်နှစ် မှ တစ်နှစ်ခွဲ ထိ ကြာရှည်ခံခြင်း
– Side effects မရှိသလောက် နည်းခြင်း
🌟 ထုံဆေးလိမ်း / ထိုးပေးတာကြောင့် နာကျင်မှာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးနော်
🌟ညိုတာ, ရောင်တာ အနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်တာကလွဲလို့ side effect မရှိပါဘူးနော်
✨ Korea နိုင်ငံမှာရော Myanmar နိုင်ငံမှာပါ FDA အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Filler နှင့် ကြိုး ကိုသာ အသုံးပြုတဲ့အတွက် အရည်အသွေးကို စိတ်ချယုံကြည်ဖို့ အာမခံပါတယ်ရှင်! ✨
⭐️အသေးစိတ်ကို ဆေးခန်းတွင် အထူးကုကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များနှင့် အခမဲ့ လာရောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်ရှင် ⭐️
💜 Peeling ကုထုံး
• BIO Peeling (၀က်ခြံအတွက် Peeling ကုထုံး)
• PHA Peeling (အသားအရေဖြူစင်ဝင်းပလိုသူများအတွက် Peeling ကုထုံး)
• Modified Jessner Peeling (၀က်ခြံနှင့်အမည်းစက်အတွက် Peeling ကုထုံး)
• Hydra Plus Peeling (ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမည့် Peeling ကုထုံး)
• Makeup Peeling (သဘာဝ Peeling ကုထုံး)
💜 Laser ( လေဆာကုထုံးများ)
• Laser Toning ကုထုံး
Melasma (တင်းတိပ် ကုထုံး)
• Laser Soft Peeling ကုထုံး
Skin Rejuvenation (အသားအရေကိုပြန်လည်နုပျိုစေခြင်း ကုထုံး)
• IPL ကုထုံး
Hair Removal (မလိုအပ်သောအမွှေးအမျှင်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း ကုထုံး)
• RF Face ကုထုံး
Skin Tightening (အသားအရေတင်းရင်းစေခြင်းကုထုံး)
• CO2 Laser ကုထုံး
Mole, Spot , Syringoma, Milia, Wart , Age Spot, Skin Tags, Liver Spot (မှဲ့၊ ကြွက်နို့နှင့် အသားပို အဆီကြိတ်များကို ဖယ်ရှားခြင်းကုထုံး)
💜 Botox ကုထုံး
• Crows Feet, Frown Lines, Forehead Wrinkles Reduction ( မျက်နှာပေါ်ရှိ အရေးအကြောင်းများကိုပြုပြင်ပေးခြင်း ကုထုံး)
• Masseter Muscle Reduction (မျက်နှာ သွယ်လျစေခြင်း ကုထုံး)
• Calf Muscle Reduction (ခြေသလုံး ကြွက်သားသေးအောင် ပြုပြင်ခြင်း ကုထုံး)
• Hyperhidrosis (ချိုင်း ၊ ခြေဖ၀ါးနှင့် လက်ဖ၀ါး ချွေးထွက်ခြင်းအတွက် ကုထုံး)
💜 Filler ကုထုံး
မေးစေ့နှင့် နှုတ်ခမ်းပုံဖော်ပေးခြင်း ကုထုံး
💜 Face Lifting and Nose Augmentation ကုထုံး
• Advanced Korean Thread Lift
ကိုရီးယားနည်းပညာဖြင့် နှာခေါင်းပုံဖော်ခြင်း၊ အသားအရေကို ပြန်လည်တင်းရင်း ပင့်တင်ပေးခြင်း ကုထုံး
💜 Body Contouring and Weight Loss Program (အဆီကျလှပစေမည့်ကုထုံးများ)
• LAMS ကုထုံး (Local Anaesthetic Minimal-invasive Lipo suction)
မနာမကျင်စေဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ရှိအဆီပိုများကို စုပ်ယူခြင်း ကုထုံး
• Mesofat Injection ကုထုံး
မေးစေ့(၂)ထပ်ဖြစ်နေသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော ကုထုံး
• RF Slimming ကုထုံး ( Arms, Abdomen & Thighs)
လက်မောင်း၊ ၀မ်းဗိုက် ၊ ပေါင်ရှိ အဆီကျပြီး တင်းရင်းစေသော ကုထုံး
• Water Shaping ကုထုံး
၀မ်းဗိုက်အဆီကျစေရန် အထူးကောင်းမွန်သော ကုထုံး
• Carboxy ( Co2) gas Injection ကုထုံး
( Co2) gas ဖြင့်အဆီချခြင်း ကုထုံး
💜 Micro Scar Removal ကုထုံး (၀က်ခြံ၊ အမာရွတ်၊ ချိုင့်ခွက် ကုထုံး)
💜 Water Shine Injection
• Moisturizing ( ကိုရီးယားတွင် Popular အဖြစ်ဆုံး အသားအရေ စိုပြေ၀င်ပစေသည့် ကုထုံး)
💜 Whitening and Brightening Injection ( အသားအရေကို ဖြူဝင်းပလိုအောင် ဆေးထိုးကုသခြင်း ကုထုံး)
Beauty Up Skin & Aesthetic Cen…